ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ အပေါ်ကိုလည်း ပညာတွေ သင်ပေးတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့် – Cele Posts
ထက်ထက်မိုးဦးရဲ့ စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ အပေါ်ကိုလည်း ပညာတွေ သင်ပေးတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်
ချောမော ပြေပြစ်တဲ့ ရုပ်ရည်အပြင် ချစ်စရာကောင်း တဲ့ အပြုံးနဲ့ ချိုသာတဲ့ အသံလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ အဆိုတော် အုပ်စိုးခန့် ကတော့ အမိုက်စားသီချင်းတွေ ကိုလည်း အထာကျကျ သီဆိုလေ့ရှိတာကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီမလေး တွေရဲ့နှလုံးသားကို ပိုင်ဆိုင်ထား သူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ အုပ်စိုးခန့်က သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ်လည်း ပြုလုပ်လာခဲ့ပြီး “အိပ်မက်တွေ မိုးထားတဲ့အိမ်” ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာလည်း နေခြည်ဦး၊ မိုရီဆာကီဝင်းတို့နဲ့ အတူတူ အတွဲညီညီ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသေးတယ်။ အသက် (၁၈) နှစ်စွန်းစွန်းသာ ရှိသေးတဲ့ အုပ်စိုးခန့်ကတော့ သူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်တွေ ဆက်တိုက်ကြိုးစားနေတဲ့ အုပ်စိုးခန့်က ဒီတစ်ခါမှာလည်း နိုင်ငံကျော် အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ အတူတူ နာမည်ကြီးကား အမှတ်တံဆိပ်ကို အွန်လိုင်းကနေ ရောင်းချပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စိုးခန့် ကတော့ ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ဆုံတွေ့စဉ်မှာပဲ သင်ယူစရာတွေရရှိခဲ့ကြောင်းကို “အပြင်မှာအရမ်းချစ် ဖို့ကောင်းတဲ့ မထက် ! ပညာတွေများကြီး သင်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ များကြီး လဲ ဆုံးမစကားတွေပြောသွားတယ်🙏🏻💞 Cutestttt 💞💞💞💞💞” ဆိုပြီး ထက်ထက်မိုးဦးအကြောင်း ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထက်ထက်မိုးဦး ကတော့ တစ်ခါမှမမြင်ဖူး၊ မဆုံဖူးပေမယ့် အနုပညာမျိုးဆက်သစ်တွေအပေါ်ကိုလည်း ပညာတွေသင်ပေး၊ ဆုံးမစကားတွေပြောပေးတာ တကယ့်ကို လေးစားစရာ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ အုပ်စိုးခန့်ကလည်း ထက်ထက်မိုးဦး လို အနုပညာရှင်ကြီးနဲ့ ဆုံတွေ့ရလို့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ပညာတွေ ရရှိမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
ထကျထကျမိုးဦးရဲ့ စိတျထားဖွူစငျပွီး မြိုးဆကျသဈ လူငယျတှေ အပျေါကိုလညျး ပညာတှေ သငျပေးတဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ အုပျစိုးခနျ့
ခြောမော ပွပွေဈတဲ့ ရုပျရညျအပွငျ ခဈြစရာကောငျး တဲ့ အပွုံးနဲ့ ခြိုသာတဲ့ အသံလေးကို ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ အဆိုတျော အုပျစိုးခနျ့ ကတော့ အမိုကျစားသီခငျြးတှေ ကိုလညျး အထာကကြ သီဆိုလရှေိ့တာကွောငျ့ နှုတျခမျးနီမလေး တှရေဲ့နှလုံးသားကို ပိုငျဆိုငျထား သူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျး မှာတော့ အုပျစိုးခနျ့က သရုပျဆောငျ တဈယောကျအဖွဈလညျး ပွုလုပျလာခဲ့ပွီး “အိပျမကျတှေ မိုးထားတဲ့အိမျ” ဇာတျလမျးတှဲ မှာလညျး နခွေညျဦး၊ မိုရီဆာကီဝငျးတို့နဲ့ အတူတူ အတှဲညီညီ ပါဝငျသရုပျဆောငျ ခဲ့ပါသေးတယျ။ အသကျ (၁၈) နှဈစှနျးစှနျးသာ ရှိသေးတဲ့ အုပျစိုးခနျ့ကတော့ သူ့ရဲ့ကွိုးစားမှုကွောငျ့ တဈနိုငျငံလုံး အတိုငျးအတာနဲ့ အောငျမွငျမှုရရှိနပွေီပဲ ဖွဈပါတယျ။
အလုပျတှေ ဆကျတိုကျကွိုးစားနတေဲ့ အုပျစိုးခနျ့က ဒီတဈခါမှာလညျး နိုငျငံကြျော အကယျဒမီ ထကျထကျမိုးဦးနဲ့ အတူတူ နာမညျကွီးကား အမှတျတံဆိပျကို အှနျလိုငျးကနေ ရောငျးခပြေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အုပျစိုးခနျ့ ကတော့ ထကျထကျမိုးဦးနဲ့ ပထမဦးဆုံး အကွိမျ ဆုံတှစေ့ဉျမှာပဲ သငျယူစရာတှရေရှိခဲ့ကွောငျးကို “အပွငျမှာအရမျးခဈြ ဖို့ကောငျးတဲ့ မထကျ ! ပညာတှမြေားကွီး သငျပေးတယျ။ ပွီးတော့ မြားကွီး လဲ ဆုံးမစကားတှပွေောသှားတယျ🙏🏻💞 Cutestttt 💞💞💞💞💞” ဆိုပွီး ထကျထကျမိုးဦးအကွောငျး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ထကျထကျမိုးဦး ကတော့ တဈခါမှမမွငျဖူး၊ မဆုံဖူးပမေယျ့ အနုပညာမြိုးဆကျသဈတှအေပျေါကိုလညျး ပညာတှသေငျပေး၊ ဆုံးမစကားတှပွေောပေးတာ တကယျ့ကို လေးစားစရာ အခကျြတဈခကျြပါပဲ။ အုပျစိုးခနျ့ကလညျး ထကျထကျမိုးဦး လို အနုပညာရှငျကွီးနဲ့ ဆုံတှရေ့လို့ အဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ ပညာတှေ ရရှိမှာ အသအေခြာပါပဲ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေး လိုကျပါတယျ။
မမျှော်လင့်ပဲ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးက အဖွားရဲ့ နောက်ဆုံး အမှတ်တရ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာ ပြောပြလာတဲ့ မိုးအောင်ရင်
သမီးလေး IVY ရဲ့ Rock Mood အပြည့်နဲ့ ချစ်စဖွယ် သီဆိုနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ချပြလာတဲ့ အေသင်ချိုဆွေ